China Powder Coating Window လူမီနီယမ် profile များကိုစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Foen
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများ၊ အမှုန့်အပေါ်ယံလွှာနှင့်အန်ဒီဒိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုအဆင့်မြှင့်ထားပါသည်။ သင်လိုချင်သောမျက်နှာပြင်မှန်ကိုအမြဲတမ်းရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုသည် ISO9001 စံနှင့်ကိုက်ညီပြီး Qualicoat ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။
လူနေအိမ်၊ စီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက် Window နှင့် Door Aluminum profile များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်ဘောင်များ၊ လျှောတံခါးထားများနှင့်ပြတင်းတင်းကြပ်သောအရာများပါဝင်သည်။ ပြတင်းပေါက်နှင့်တံခါးကိုလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်သံချေးခြင်းမပြုလုပ်သောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ရာပြင်ပတွင်သာမကအိမ်တွင်း၌အသုံးပြုနိုင်သည်။
1、 အသုံးပြုမှု - ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်မြေများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
2、 အချင်း: သင့်ရဲ့ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီ, စိတ်ကြိုက်။ အရှည်: <= 13m
3、 Surface treatment: အန္ဒနို၊ အမှုန့်အဖုံး၊ ဖလိုရိုကာဗွန်အဖုံး၊
4、 လက်မှတ်: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE
ပစ္စည်းအဆင့် 6000 စီးရီးလူမီနီယမ်
စံ GB ကို 5237-2008, ASTM B221, EN 755-9, EN12020
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ အမှုန့်ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားပြား၊ Eletrophoresis၊ PVDF၊
နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်ကိုစွမ်းရည် တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်း၊ အချောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် အလွိုင်း: 6063,6060,6005,6061,6082,6101,6106, etc
ပြည်နယ်: T3-T8 / နံရံအထူ：> 0.8mm
ဒီဇိုင်းနှင့်သည်းခံစိတ် ပုံဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာ.Toleranceနှုန်းအတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီပုံဆွဲအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်
မှို / သေ မှိုလုပ်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနှုန်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်
1. ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိမှိုအသုံးပြုခြင်း, အဘယ်သူမျှမပို
ဖောက်သည်များ၏ပုံဆွဲခြင်း၊ မှိုအသစ်များကိုဖြတ်ခြင်း၊ တန်ချိန်အချို့တန်ချိန်ရောက်သောအခါမှိုကြေးပေးဆောင်ရမည်
လျှောက်လွှာ အကုန်အကျအားလုံး။ ၀ င်းဒိုးများနှင့်တံခါးများ၊ ကုလားကာနံရံ၊ ခြံစည်းရိုး၊ စံပုံစံ (ပြွန်၊ ပိုက်၊ ချန်နယ်)
ရုပ်သံလိုင်း၊ ထောင့်၊ ဘား၊ T, C, U စသည်တို့၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ (အပူစုပ်စက်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘောင်၊ စပယ်ယာရထား၊ ကား၊ ဆဲလ်ဖုန်းစသည်တို့)
မီးဖိုချောင်ကက်ဘိနက်၊ ဗီရို၊ ရထားလမ်း၊ ပရိဘောဂ၊ ရုံးခန်း၊ အခန်းကန့်၊ roller shutter၊ နေအခန်း၊
လက်မှတ် အီး, ISO9001, OHSAS18001.ISO 14001 ။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ဆိုက်တွင် 1. စစ်ဆေးခြင်း, ရေကြောင်းမတိုင်မီ 2. စစ်ဆေးခြင်း 3.Testing စက်
ပုံမှန်အမိန့် sequence ကို ပန်းချီကားများ၊ အရောင်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုလိုက်နာပါ။
အပ်ငွေ ၃၀% ငွေပေးချေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှုကာလ မျက်မှောက်မှာ T / T က, L / C
ကွန်တိန်နာအမျိုးအစား 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 45'HQ
အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက် FCL အတွက် 1x20'GP FOB သို့မဟုတ် LCL အတွက် ၅ တန် EXW
ရှေ့သို့ ပြတင်းပေါက်များအတွက် Anodized လူမီနီယမ် profile များကို
နောက်တစ်ခု: လျှောတံခါးများအတွက်လူမီနီယမ် profile များကို